Ọzụzụ 1e N'ỤTA - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (ỤLỌ-Oge / A-STREAM // CAMPUS RUGGEVELD)
sayensị, nkà na ụzụ, injinia, mgbakọ na mwepụ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > STEM> Engineering & Technology > 1e Degree ụda
n'ime Ntuziaka 1e A na-arụ ọrụ STEM anyị na-elekwasị anya na Ngwá ọrụ 21th nke narị afọ. Taa, teknụzụ na-agbanwe n'ike n'ike karịa ka oge na-aga. STEM na-anọchite anya ya Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ndị anọ a jikọtara ọnụ. Dika "di omimi di iche iche" i na eme ihe omuma ihe, ihe okike, nkasi obi na ngbazi nsogbu, nche echiche, na otutu ihe. Na nke a, ị ga-eji nkà ndị a malite site na ntinye akara (ụbụrụ dị elu, microbit, Adruino, ...), ịgụ akwụkwọ mgbasa ozi, ihe ọhụrụ, nkà na ụzụ IT, wdg. Ihe ndabere dị mma maka ọzụzụ maka ọdịnihu!
N'ime STEM anyị na-elekwasị anya dị ka o kwere mee na Ngwá ọrụ 21th nke narị afọ.
Anyị na-arụ ọrụ niile gbasara ya Usoro injinia.
ALL OZI Gbasara VOTE ONYE! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Ịchọ sayensị na nkà na ụzụ na-amasị gị? Ị nwere ike ịhazi na mmemme na kọmputa ahụ? Ị nwere mmasị na usoro ihe ọkụkụ na ọkụ eletrik?
Ị gafeela afọ 2e? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ụkpụrụ n'ụdị ọ bụla nke ogo mmụta abụọ. Ị nwere ike ịnọgide na-amụrụ anyị na ebe ọmụmụ ihe STEM Electromechanics en Usoro ntanetị / Usoro nrụnye eletriki
Gaa ebe a na teepu ihe ọmụmụ nke 1e grade A flow STEM: